अन्तर्वार्ता – Page2– Tesro Ankha
बन्दुक चलाउनु कर्म, कलम चलाउनु रहर अनि धर्म
लाहुरे बन्नअघिदेखि नै उनी साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँथे । अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेकै छन् । भन्छन्, ‘लाहुरे हुनुपूर्व नै कविताको धङधङीले छोइएको थिएँ । यसर्थ, म कवि अनि लाहुरे भन्नु युक्तिसंगत ठान्छु ।’ बन्दुक चलाउनु मेरो कर्म हो । कलम चलाउनु पहिलो रहर अनि अब बिस्तारै धर्म पनि बन्दै गएको छ भन्ने कवि जगत नवोदितसँग तेस्रो आँखा डटकमका लागि दीपेन्द्र राईले गरेको कुराकानी : कलम बलियो हुन्छ कि...
भूपू गोर्खा मेजर भन्छन्– गोर्खा कम्युनिटी, नेपाल बनाऔँ
भूतपूर्व गोर्खाली धेरै छन् । तर, मेजर लक्ष्मीप्रसाद गुरुङजस्तो गोर्खाली भने कमै छन् । गुरुङले गोर्खाली समुदाय, राष्ट्र र जनताका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्यले पोखरामा ‘गोर्खा कम्युनिटी’ नामक संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उक्त संस्थाले गोर्खा सहकारी, उपभोक्ता पसल, रेडियो र ज्वेलर्स सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । स्वदेशमै विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि गराउने र...
‘लेबरमा नआउनुस्, गाह्रो हुन्छ’
तपाईंको आफ्नो बारेमा बताइदिनुस् न ? मेरो नाम धर्मराज राई हो । मेरो घर धनकुटा हो । म अहिले साउदी अरबमा तामिमी कम्पनीको दम्माम क्याम्प अल्ल खोबरमा काम गर्छु । म यहाँ आएको आठ वर्ष भयो । अहिले दिनको आठ घण्टा मात्र काम गर्छु । तलब १,२०० रियल छ । जेनतेन गुजारा चलाएको छु । त्यहाँ अवसर कस्तो छ ? खानु बस्नु कम्पनीले दिन्छ । महिनाको तलब समयमै पाएको छु । लेबरको इन्सुरेन्स र मेडिकल सुबिधा पनि छ । दु...
डुम्रेधारापानी प्रहरी चौकी खोटाङका असई हेमबहादुर अधिकारीको अत्याचार
जहाँ राजा वीरेन्द्रले महिना दिन बिताए
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका मेयर इवन राईको काठमाडौंमा सक्रियता
नाम्चेमा भरियाका लागि छुट्टै होटल
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पहिलो दिन हलेसीमा १ हजार दीप प्रज्वलन